Ndingayisebenzisa njani uphando lwegama elingundoqo kwii-Amazon izinto ezifanelekileyo?
Namhlanje, ama-Amazon sele abe negama lomkhwa wokukhangela kwi-intanethi. Kwaye wonke umntu ukhululekile ukuzama ukunyusa umkhiqizo ngaphaya kwalo - kunye nabathengi abalinganiselwa kwi-80 yezigidi ezithengileyo ngaphaya kwaloo mcimbi kuphela ukuba uluhlu lwemveliso yakho kufuneka lubonwe ngabathengi abaninzi abanakho. Xa sicinga ukuba le ndawo inkulu yemarike ine-algorithm yayo yokubala, ndiyazi ukuba isebenza ngokufanayo kunye nokukhangela kwikhompyutha eqhelekileyo eyaziwayo ngabasebenzisi kwihlabathi lonke elingaphezu kweminyaka engamashumi amabini (umzekelo, yi-Google ngokwayo. ku). Yingakho ndikholelwa ukuba inqakrazo yokuphumelela kuyo yonke i-ecommerce usomashishini osithengisayo ngaphaya kweengcambu ngokuchanekileyo ukususela kwi-keyword yophando kuma-Amazon. Ngokuqinisekileyo, kukho iqela elinamandla lokuthengisa elisafuneka ukuba libe ngumthengisi wenkxaso-mkhulu kweso siqwenga esiphezulu. Ungathethi ukuba awuyi kuchitha ixesha lakho eqhuba uphando lokhuphiswano ukuba lukhokele phambili. Nangona kunjalo, ndiqinisekile ukuba ukufakwa kohlengahlengiso kwemveliso yinto yokuqala yokwenza xa kuziwa ekufumaneni ngcono ukukhangela kwikhompyutha. Yingakho ngaphantsi ndiza kukubonisa ngokufutshane indlela yokusingatha uphando lwegama elingundoqo kwii-Amazon iimveliso - kwaye uphume ngaphandle kokhuphiswano lophando emva kwakho konke.
Umyinge woku-1: Imigqaliselo yembewu
Qala ngegama elibanzi lophando lwemveliso ye-Amazon nje ngokubeka iinjongo eziphambili kwi-bar yokukhangela ye-Google. Ngale ndlela, uya kufumana umfanekiso opheleleyo wendlela abantu abanokufuna ngayo izinto zakho. Emva koko, gxininisa kwii-key-tail keywords kunye neentetho ezithile ezihambelana nethi yakho. Ngexesha elifanayo, kuya kuba sisisombululo esilungileyo sokuhlola abanye abathengisi abahamba phambili beqhuba ibhizinisi labo lokuthumela i-drop-shipping iminyaka. Yilapho zonke ezo zixhobo zokulandelela ezikhethekileyo kunye nezikhokelo ze-intanethi zidlala.
Umgangatho wesi-2: Iingcebiso ze-Smart
Isinyathelo sakho esilandelayo sikhetha ithuluzi lokusesha elingundoqo lezinto ze-Amazon. Ngenhlanhla, kukho iindidi ezininzi ezahlukahlukeneyo, ezininzi zazo zifumaneka ekufikeleleni okuvulelekileyo. Kakade, ezinye zazo zihlawulwa-ukufikelela kuphela, kodwa kusekho abaninzi abancedisayo nabanokwenene ngaphandle kokuhlawula ipenki. Emva kwakho konke, akuyikho-brainer kwaye kuya kuwe ukugqiba ukuba yiyiphi ithuluzi lokukhetha - eqinisweni ininzi yayo iyenzelwe ngokukodwa kwi-keyword search ukuze ikunike iziphakamiso zokuncintisana ezibalulekileyo ekugqibeleni.
Umgangatho wesi-3: Uhlalutyo lwamatriki
Kwaye ngoku siza ekugqibeleni. Into yokuba xa uqhuba uphando lwegama eliphambili kwii-Amazon iimveliso unokuba ukhululeke kakhulu ngamawaka eengcamango zegama eliphambili. Ngoko, umngeni omkhulu kukugqiba ukuba zeziphi ezifanelekileyo kwaye zifanelwe ukuba zifumaneke kuhlu lwakho olufutshane. Ngaloo ndlela, qiniseka ukuhlawula ingqwalaselo echanekileyo kule methrikhi elandelayo:
I-volume yosesho - i-metric ebonisa ukuba bangaphi abantu ngelizwe basebenzise igama lakho elingundoqo kwisicelo sombuzo wokukhangela .
Ukuchofola - kubonisa ithemba eliqhelekileyo legama elingundoqo ukuze kuveliswe i-traffic kunye nokusetyenziswa rhoqo ngabathengi.
Ukuqineka -ngenjalo, ubunzima begama elingundoqo, ukuba ufanele ulinge ukufumana amagama angaphantsi okufutshane anokukhangela ukuhamba kweetratki kwizinto zakho ezikhethiweyo.